निम्छरो निजामती – Rajdhani Daily
नेपाल निजामती सेवा सधैंभरि अस्थिर र तदर्थ कानुनको मारमा परेको छ । २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आयो । निजामती सेवालाई संस्थागत र चिरस्थायी बनाउन कोशे ढुंगा साबित भएको यो ऐन छोटो र संक्षिप्त थियो । अन्य विस्तृत प्रावधानहरू नियमावलीमा लिपिबद्ध थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई बलात विघटन गरे, प्रधानमन्त्रीलाई थुने र संसदीय प्रणाली भंग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । पञ्चायतका लगभग ३० वर्षमा लगभग ४० पटक निजामती सेवा नियामावली संशोधन भयो । आफ्नो बलबुता हुनेले आफ्नो पक्षमा जेजे गर्न सकिन्छ, त्यो त्यो गरे । यस्तो अस्थायी र तदर्थ कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस बखतको निजामती सेवा स्थिर र स्थापित थियो । साँच्चै भन्ने हो भने निजामती सेवाले संस्थागतस्वरूप प्राप्त गरेको नै पञ्चायतकालमा हो ।
विभागीय मन्त्रीस“ग एकान्त गरेर त्यही मन्त्रीको मन्त्रालयमा पदस्थापन भएर आउने सचिव या डीजीले निष्पक्ष र निडर भएर काम गर्ला भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिन्न, बरु प्रधानमन्त्रीले पठाएको सचिव या डीजीको शिर ठाडो होला
नेपालका बहुदलीय नेताको हातमा शासन सत्ता आउनेबित्तिकै केही निजामती कर्मचारीले देशमा स्थापना भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्वाद प्रशासन यन्त्रले पनि चाख्न पाउने माग गरे । नेताहरू भावनामा बगे । निजामती सेवामा राजनीति घुस्यो
यसो हुनुमा ठूलो मनोवैज्ञानिक, व्यवस्थापकीय एवं आस्था, भरोसा र विश्वासले काम गरेको छ । त्यस समयको सबैभन्दा युगान्तकारी पक्ष निष्पक्ष र सक्षम लोकसेवा आयोगको संस्थागत विकास, निजामती सेवाप्रति प्रतिभाशाली युवाहरूको आकर्षण र सरकारी नोकरी राजकीय महिमासँग जोडिनु थियो । निजामती सेवामा जागिर पाउनु भनेको राजाको सिन्दुर पहिरेसरह हो र प्राप्त हुने सुविधा राजाको नुन हो भन्ने भावना थियो । पञ्चहरूले निजामती सेवालाई प्रतिष्ठित सेवाको रूपमा स्थापित हुन सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका खेले । अर्को कुरा राजाले प्रारम्भ गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउने हो भने बलियो निजामती प्रशासनको सहारा लिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई पञ्चायती नेताहरूले मनन् गरेका थिए ।
बहुदलीय प्रणालीको प्रादुर्भाव भएपछि दुर्भाग्यवस निजामती सेवासमेत बहुदलीय हुन पुग्यो । यस मामिलामा बहुदलीय नेताहरू नराम्रोसँग चुके, अझै चुक्दै छन् । बलियो निजामती सेवा नै देशमा अंगिकार गरिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा हाम्रा नेताले बुझ्न सकेनन् ।
भारतमा ब्रिटिस शासन समाप्त भई स्वराज स्थापना भएपछि त्यहाँको निजामती सेवालाई विघटन गर्ने आवाज उठेको थियो । यसो हुनुको मुख्य कारण थियो स्वतन्त्रतापूर्वको समयमा भारतीय मूलका उच्च निजामती अधिकारीहरूले जोडतोडले विदेशी शासनको पक्षपोषण गर्नु । गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले योग्य व्यक्तिहरू रहेको र स्थापित संस्थालाई विघटन गरिएमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो हुने कुरा बताएका थिए । उनको विचार थियो निजामती सेवा एउटा स्थापित, दक्ष र अनुशासित संस्था हो, यसलाई सदुपयोग गर्न सकिएमा राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउनमा समेत ठूलो मद्दत मिल्नेछ । नेपालका बहुदलीय नेताहरूको हातमा शासन सत्ता आउनेबित्तिकै केही निजामती कर्मचारीले देशमा स्थापाना भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्वाद प्रशासनयन्त्रले पनि चाख्न पाउने माग गरे र उक्साए पनि । नेताहरू भावनामा बगे, निजामती सेवामा पनि राजनीति घुस्यो । यसले गर्दा निजामती सेवामा नयाँ युग सुरु भयो, दलीय बिल्लायुक्त कर्मचारी संगठनको युग । सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै फलाना दल निकट संगठन भनेर सम्बोधन गर्न थाले । निजामती सेवामा काम गर्नुपर्ने, काम नगरे पनि हुने र काम गर्न नपर्ने तीन वर्गको उदय भयो, जसलाई नेताहरूले सहर्ष स्वीकार गरे । पछिल्लो जनआन्दोलनपछि त निजामती सेवा झन् आक्रान्त हुँदै गयो ।
निजामती सेवा स्थापनाको ६३ वर्षको समयमा अहिले जस्तो नाजुक अवस्थामा कहिलै पुगेको थिएन । देशको स्थायी सरकार आज सरेआम कठघरामा उभिएको छ, सबका सबले ललकारिरहेछन्, हप्काइरहेछन् । राजनीतिले प्रशासनलाई हेप्ने प्रवृत्ति पराकाष्ठामा पुगेको छ । यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थायी सरकारको यस्तो हालत छ, उता समृद्धिको नारा घन्किरहेको छ । कर्मचारीबाट हुँदैन, अब युवा परिचालन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरासमेत उठ्न थालेका छन् ।
निजामती सेवाको अकर्मण्यताबारे यस्तो हावा लाग्यो कि किसान, व्यापारी, उद्योगपति, वृद्धवृद्धा र बिरामी, कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाका अभिभावक साराका सारा कर्मचारीतन्त्रसँग असन्तुष्ट छन् । पहिले राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रशासनलाई राजनीतीकरण गर्न प्रोत्साहित गरियो या आँखा चिम्लने काम भयो, अहिले यही सेवा उनीहरूको नजरमा निकम्मा बन्न पुगेको छ । जसले बिगारे उनीहरूले नै यसको आलोचना गर्दै छन् तर आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन । निजामती सेवालाई लागो लागेको छ । लागो झार्न सकियो भने मात्र यसलाई फर्ममा ल्याउन सकिन्छ, मुख्य कुरा लागो झार्ने चाहना हुनुपर्यो ।
संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकउपर कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्य सम्पादन सम्झौता, जिम्मेवारी र जवाफदेही, दण्ड, सजाय आदि विषयमा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप अघि बढ्न नसकेको, ब्युरोक्रेसी चाकरीका लागि बनाइएको संगठनजस्तो देखिएको र त्यसैसँग राजनीतिक नेतृत्व घुलमिल भएको कटु तर सत्य आरोपसमेत लगाएका छन् । निजामती विधेयकउपर १ सय ५६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्, जसमा निजामती सेवालाई प्रतिष्ठित, मर्यादित र स्थापित संस्था बनाउनेतर्फ नभई कर्मचारीलाई तह लाउने कुरा प्रमुख छन् । माननीय सांसदहरूबाट राष्ट्रको समृद्धि र बृहत्तर हितका लागि नै संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएका हुन् भन्नेमा शंका छैन तर संशोधन प्रस्तावमा मुख्य कुरा नै छुट्न गयो ।
संशोधनमा प्रशासनको राजनीतीकरण नगर्ने, मन्त्रीहरू संगठनको कार्यक्रममा जान नपाउने, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू कार्यालय समयमा मन्त्रालय विभाग जान नपाउने, आफ्ना व्यावसायिक गुनासा र सल्लाह भए औपचारिक बैठकको आयोजना गरी पेस गर्नु पर्ने कुरा राख्नुपथ्र्याे । निजामती सेवा बिग्रेको राजनीतीकरण र चाकरीले हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । कुनै विभागीय मन्त्रीसँग एकान्त गरेर त्यही मन्त्रीको मन्त्रालयमा पदस्थापन भएर आउने सचिव या डीजीले निष्पक्ष र निडर भएर काम गर्ला भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिन्न, बरु प्रधानमन्त्रीले पठाएको सचिव या डीजीको शिर ठाडो होला ।
केही वर्षअघिको कुरा हो । एउटा ठूलो विभागमा नयाँ डीजीको पदस्थापन भएछ । डीजी साहेब अनुशासित र योग्य मानिस नै थिए, आफ्नो विषयका राम्रै विज्ञ पनि थिए तर विभागीय मन्त्रीले उनको दोहोलो काडे । कर्मचारी, भेट्न आउने आगन्तुक जसको अगाडि पनि तपाईंलाई मैले डीजी बनाएको होइन ? भन्दै हप्काइरहन्थे मन्त्री । हुँदाहुँदा डीजीकी श्रीमतीसँग समेत मैले तपाईंको श्रीमान्लाई डीजी बनाएँ भनेछन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ कर्मचारी डीजी बन्नु स्वाभाविक कुरा थियो तर आफैं माग्न गएको हुँदा मानमर्दन भयो, हेप्ने मौका दिने काम भयो ।
Tags: निम्छरो निजामती
सत्यमार्ग र मौन दलहरू
डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई देशका लागि मरिहत्ते गरेर राष्ट्रवादिता देखाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था अझैसम्म आएको छैन । राष्ट्रवादको भावनामा प्रतिस्पर्धाको बीउ रोपिएको हुन्छ । बरु उनीहरू...
नेटवर्क गभर्नेन्स, को–गभर्नेन्स र को–प्रडक्ट्स : एक अवधारणा
लक्ष्मीविलास कोइराला राज्यका सबै क्रियाकलापको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास गर्नु गभर्नेन्स हो । अर्थात्, अधिकार सम्पन्न निकायले समष्टिगत तथा व्यष्टिगत रूपमा जनताका ...